Ihe mere e ji nye ndị Izrel ala ahụ (1-6)
Ndị Izrel kpasuru Jehova iwe ugboro anọ (7-29)
Nwa ehi ọlaedo (7-14)
Mosis rịọchiteere ha arịrịọ (15-21, 25-29)
Ugboro atọ ọzọ ha kpasuru Chineke iwe (22)
9 “Ndị Izrel, nụrụnụ. Taa, unu na-agafe Osimiri Jọdan+ ka unu gaa weghara ala nke mba ndị dị ukwuu ma dị ike karịa unu,+ bụ́ obodo ndị dị ukwuu, ndị a rụsikwara ike ruo n’eluigwe.*+ 2 Ndị bi na ha dị ike ma too ogologo. Ha bụ ndị Anakim+ ndị unu ma gbasara ha, ndị unu nụrụ na e kwuru gbasara ha, sị, ‘Ònye nwere ike imeri ụmụ Anak?’ 3 N’ihi ya, maranụ taa na Jehova bụ́ Chineke unu ga-ebutere unu ụzọ.+ Ọ bụ ọkụ na-erechapụ ihe.+ Ọ ga-alakwa ha n’iyi. Ọ ga-emeri ha, unu ejiri anya unu hụ ya, ka unu wee chụpụ ha ma bibie ha n’egbughị oge, otú Jehova kwere unu ná nkwa.+ 4 “Mgbe Jehova bụ́ Chineke unu ga-achụpụrụ unu ha, unu asịla n’obi unu, ‘Ọ bụ maka na anyị bụ ndị ezi omume mere Jehova ji kpọbata anyị n’ala a ka anyị biri na ya.’+ Kama, ọ bụ n’ihi ihe ọjọọ mba ndị a na-eme+ mere Jehova ji na-achụpụrụ unu ha. 5 Ọ bụghị maka na unu bụ ndị ezi omume ma ọ bụ maka na unu nwere ezigbo obi mere unu ji na-abanye ka unu biri n’ala ha. Kama, ọ bụ n’ihi ihe ọjọọ mba ndị a na-eme mere Jehova bụ́ Chineke unu ji na-achụpụrụ unu ha+ nakwa ka Jehova mezuo iyi ọ ṅụụrụ nna nna unu hà, bụ́ Ebreham,+ Aịzik,+ na Jekọb.+ 6 Maranụ na ọ bụghị maka na unu na-eme ezi omume mere Jehova bụ́ Chineke unu ji enye unu ezigbo ala a ka unu biri na ya, n’ihi na unu bụ ndị isi ike.*+ 7 “Chetanụ otú unu si kpasuo Jehova bụ́ Chineke unu iwe n’ala ịkpa,+ unu echefula. Malite n’ụbọchị unu si n’Ijipt pụta ruo mgbe unu rutere ebe a, unu nọ na-enupụrụ Jehova isi.+ 8 Unu kpasudịrị Jehova iwe na Horeb, Jehova wee wesa unu oké iwe nke na ọ chọrọ ịla unu n’iyi.+ 9 Mgbe m gbagoro n’ugwu ịnata mbadamba nkume abụọ ahụ,+ ya bụ, mbadamba nkume ndị e dere ihe Jehova kwuru mgbe unu na ya gbara ndụ,+ m nọgidere n’ugwu ahụ ruo ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị.+ Erighị m nri, aṅụghịkwa m mmiri. 10 Jehova bunyeziri m mbadamba nkume abụọ o ji mkpịsị aka ya dee ihe na ha. Ihe e dere na ha bụ ihe niile Jehova gwara unu n’ugwu ahụ mgbe o si n’ọkụ gwa unu okwu n’ụbọchị unu zukọtara.+ 11 Mgbe ụbọchị iri anọ ahụ (ehihie na abalị) gwụrụ, Jehova bunyere m mbadamba nkume abụọ ahụ, bụ́ mbadamba nkume ndị e dere ihe unu na Chineke gbara ná ndụ. 12 Jehova sịkwara m, ‘Bilie, si n’ebe a gbadaa ọsọ ọsọ, n’ihi na ndị gị ị kpọpụtara n’Ijipt emerụọla onwe ha.+ N’egbughị oge, ha ahapụla iwu m nyere ha ka ha na-edebe. Ha emeerela onwe ha arụsị a kpụrụ akpụ.’+ 13 Jehova sịziri m, ‘Ahụla m ndị a, ha bụ ndị isi ike.*+ 14 Hapụ m ka m laa ha n’iyi ma hichapụ aha ha n’ụwa,* ka m meekwa ka ị bụrụ mba dị ike, nke nwere ọtụtụ mmadụ karịa ha.’+ 15 “M wee tụgharịa si n’ugwu ahụ gbadata mgbe ugwu ahụ ka na-ere ọkụ,+ ebukwa m mbadamba nkume abụọ ahụ e dere ihe unu na Chineke gbara ná ndụ n’aka m abụọ.+ 16 M lere anya hụ na unu emehiela Jehova bụ́ Chineke unu. Unu emeerela onwe unu nwa ehi a kpụrụ akpụ. N’egbughị oge, unu ahapụla iwu Jehova nyere unu ka unu na-edebe.+ 17 M wee buru mbadamba nkume abụọ ahụ m bu n’aka m abụọ kụrisịa ha n’ihu unu.+ 18 M makpuuru ala n’ihu Jehova ruo ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị, otú m mere na mbụ. Erighị m nri, aṅụghịkwa m mmiri+ n’ihi mmehie niile unu mere mgbe unu mere ihe ọjọọ n’anya Jehova ma kpasuo ya iwe. 19 N’ihi na egwu tụrụ m maka nnukwu iwe Jehova wesara unu,+ nke na ọ chọdịrị ịla unu n’iyi.+ Ma, Jehova gekwara m ntị n’oge ahụ. 20 “Jehova wesara Erọn ezigbo iwe nke na ọ chọrọ igbu ya.+ Ma n’oge ahụ, m rịọsikwara arịrịọ ike maka Erọn. 21 M wee buru nwa ehi ahụ unu kpụrụ,+ nke bụ́ mmehie unu mere, kpọọ ya ọkụ. M gweriri ya nke ọma ruo mgbe ọ dị ka ntụ. M wụnyeziri ntụ ahụ n’iyi si n’ugwu ahụ na-asọda.+ 22 “Na Tabera,+ Masa,+ nakwa na Kibrọt-hateeva,+ unu kpasukwara Jehova iwe. 23 Mgbe Jehova gwara unu ka unu si na Kedesh-bania+ pụọ, sị, ‘Gaanụ weghara ala ahụ m ga-enye unu,’ unu nupụrụ isi ọzọ n’iwu Jehova bụ́ Chineke unu.+ Unu enweghịkwa okwukwe+ na ya, unu erubereghị ya isi. 24 Unu na-enupụrụ Jehova isi kemgbe m ma unu. 25 “M wee makpuru ala n’ihu Jehova ruo ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị.+ M makpuuru ala otú a maka na Jehova sịrị na ya ga-ala unu n’iyi. 26 M malitere ịrịọsi Jehova arịrịọ ike, sị, ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, biko, ebibila ndị gị. Ha bụ ndị nke gị,*+ ndị i ji ike gị gbapụta, jirikwa aka gị dị ike kpọpụta n’Ijipt.+ 27 Cheta Ebreham, Aịzik, na Jekọb,+ bụ́ ndị ohu gị. Leghara isi ike ndị a na-eme anya nakwa omume ọjọọ ha na mmehie ha.+ 28 Ma ọ́ bụghị ya, ndị bi n’ala i si kpọpụta ha nwere ike ịsị: “Jehova enweghị ike ịkpọba ha n’ala o kwere ha ná nkwa, ọ kpọkwara ha asị. Ọ bụ ya mere o ji kpọpụta ha ka o gbuo ha n’ala ịkpa.”+ 29 N’ihi na ha bụ ndị gị, ndị nke gị,*+ ndị i ji aka gị siri ike na nnukwu ike gị kpọpụta.’+
^ Ma ọ bụ “ndị i ketara.”